review – OOTDMYANMAR
7 STYLISH & COMFY LBDS FOR WFH
No Comments on7STYLISH & COMFY LBDS FOR WFH
WFH အတွက် စတိုင်ကျပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အနက်ရောင်ဝတ်စုံ ၇ မျိုး
Little black dress withoutadoubt, is essential in any girl’s closet. It’saversatile piece that you can rock while requiring just few effort to style. Since, we’re all staying home for our safety, obviously LBDs are the last option we’d want to wear. Since we opt for comfort ,its very tempting to choose oversized tees, silk pajamas, and anything comfortable.
အနက်ရောင်ဝတ်စုံဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အဝတ်ဗီရိုထဲမှာ မပါမဖြစ်ဝတ်စုံဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ အနက်ရောင်ဆိုတာ ဘာနဲ့မဆိုတွဲစပ်ရလွယ်ကူတဲ့အပြင် အများကြီးစဉ်းစားစရာမလိုဘဲ စတိုင်ကျတဲ့အသွင်အပြင်ကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အခုကာလမှာ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ အိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက် အဝတ်အစားရွေးချယ်တဲ့နေရာမှ LBD (Little Black Dress) တွေက နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နေပါပြီ။ သက်သောင့်သက်သာရှိဖို့က အဓိကဦးစားပေးဖြစ်တဲ့အတွက် တီရှပ်အပွတွေ၊ ပိုးသားညအိပ်ဝတ်စုံတွေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဘယ်အဝတ်အစားကိုမဆို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။
But remember your LBDs! Don’t just leave them in your closet. These little dresses can give youalaidback, yet still put-together vibe in time for your Zoom meetings, and online chats.
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ LBD လေးတွေကို ဗီရိုထဲမှာ အကြာကြီးပစ်မထားကြပါနဲ့။ အဲ့ဒီဝတ်စုံတွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ zoom meeting ဒါမှမဟုတ် online chat တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ စတိုင်ကျပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အသွင်အပြင်မျိုးကို အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Below, we listed7stylish LBDs from MDS MYANMAR made for for lounging, relaxing, and everything in between.
အချစ်တို့အတွက် MDS MYANMAR ရဲ့ စတိုင်ကျပြီး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် LBD ဝတ်စုံ ၇ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Sonya Ruffled-Hem Dress @55,000 KS
Agnes Sleeved Dress in Black @36,000 KS
Elenore Gathered Dress @65,000 KS
Khloe Shift Dress @49,000 KS
Lauren Mesh Ruffled Dress @57,000 KS
Marna Lace Trimmed Dress @59,000 KS
Poppie Ruffled Dress in Black @62,000 KS
PS MDS Myanmar shops are temporarily closed because of the lockdown but you can shop online.
Tags lbd, mdsmyanmar, myanmar, ootd, yangon
CUTE LOUNGWEAR SET UNDER 16,000 KS
No Comments on CUTE LOUNGWEAR SET UNDER 16,000 KS
Cute Loungewear Sets Under 16,000 KS You Can Shop Online
အွန်လိုင်းကနေ ၁၆ဝဝဝ ထက်မပိုတဲ့စျေးနဲ့ရနိုင်မယ့် အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အိမ်နေရင်းဝတ်စုံ ၈စုံ
We may be at home most of the time, its no surprise that we still want to look stylish and comfy at the same time. Maybe, some people are still in search on where or what to buy. Luckily, online fashion is the perfect solution.
အိမ်တွင်းအောင်းနေရတယ်ဆိုပေမယ့် သက်တောင့်သက်သာလည်းဖြစ် အထာလည်းကျတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့နေချင်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။ တချို့တွေကတော့ ဘယ်မှာ ဘာတွေ ဝယ်ရမလဲ လိုက်ရှာနေကြတုန်း ဖြစ်မှာပါ။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ Online Fashion က အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်နေပါတယ်။
Since we are advocating, #supportlocalbusiness we have compiled cute loungewear fromalocal brand Just -Me – Myanmar
#supportlocalbusiness လို့ဆော်သြနေကြသလိုပဲ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Just-Me-Myanmar က ချစ်စရာ အိမ်နေရင်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Make sure to grab their ongoing sale. Check out below our top picks:
Sale ရှိတုန်း ဝယ်ထားမှဖြစ်မယ်နော်။ OOTD ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတွေကတော့
#1 PINK FEVER (Short Classic Pyjama Set in Pink 11,000 KS)
#2 PURPLE IS ADORABLE (Lilac Cami-set 9,000 KS)
#3 RED DRESS IS A POWER DRESS (Marie Maxi Gown 7,500 KS)
#4 FUSCHIA ROBE, BABY (Maxi Robe in Fuchsia 16,500 KS)
#5 PASTEL BLUE FOR THE COOL YOU (Lia Cami Set in Blue 14,500 KS)
#6 LOOK NATURAL WITH GREEN NIGHT WEAR (Empress Satin Gown in Emerald 11,000 KS)
#7MAROON WITH LACES FOR THE SEXY YOU (Chloe Cami set 14,500 KS)
#8 PEACH PERFECT LIKE YOU(Satin Cowl neck chemise 13,000 KS)
ဒီကနေလည်း သူတို့ pageကို ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Tags justmemyanmar, ootdmyanmar, supportlocalbusinesses, yangon
OOTD POSTS TO TRY FOR A SHY GIRL
No Comments on OOTD POSTS TO TRY FOR A SHY GIRL
ရှက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတို့အတွက် OOTD post များ
Let’s face it not everybody has the confidence to post infront of the camera. Whether you’re takingaphoto for Instagram or Facebook there would be times when you just feel so shy and awkward. So, we scrolled through some of the photos tagged by our lovely followers, photos you can actually try especially when you are camera shy. Check out the poses you could try below:
လူတိုင်းက ကင်မရာရှေ့မှာ ဟန်လုပ်ပြဖို့မရဲကြပါဘူး။ instagram ဒါမှမဟုတ် facebook မှာ ပုံတင်ဖို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့အခါ ဟန်လုပ်ရမှာရှက်လို့ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် OOTD ကို tag တွဲပြီး ပုံလေးတွေတင်ထားကြတဲ့ ချစ်ရတဲ့ follower တွေရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း ကင်မရာရှေ့မှာဟန်လုပ်ဖို့ရှက်တတ်တဲ့လူတွေအတွက် အကြံဉာဏ်ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ပုံလေးတွေက လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
#1 Let the sun race thru your face (မျက်နှာကိုနေရောင်လေးထိနေပါစေ။)
Photo via @khamhsusan
#2 Looking down while smiling (မျက်နှာအောက်ငုံ့ထားပြီး ပြုံးပြုံးလေးနေပါ။)
Photo via @iris_ths
#3 Think cute.
Photo via @sawunicorn
#4 Laughing while you fix your hair. (ဆံပင်သပ်တင်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာရယ်မောပါ။)
Photo via @__p.o.r.t.i.a__
Photo via @daria_glory_mm
#7 Use bags asaprops while you pretend talking to someone (တစ်ယောက်ယောက်ကို စကားပြောနေတဲ့ဟန်လုပ်ရင်း အိတ်တွေ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုသုံးပါ။)
Photo via @khaingzinthaw_oopsie
#8 Checking my earring if it fell post (နားကပ်ပြုတ်ကျမကျ စစ်ဆေးတဲ့ဟန်လုပ်ပါ။)
Photo via @iris_mnp
By the way, MDS Myanmar is having their mid-year sale until 12th of July. Yup, it’s up to 70% off on selected items.
ဒါနဲ့စကားမစပ် MDS Myanmar က ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့အထိ mid-year sale ကျင်းပနေပါတယ်။ selected item တွေကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးနေတာနော်။
Tags Fashion, mdsmyanmar, myanmar, ootdmyanmar